Kulan Ka Dhacay Degmada Wardheer. - Cakaara News
Kulan Ka Dhacay Degmada Wardheer.
Wardheer(cakaaranews) Arbaca, 31ka, August, 2016. Waxaa ka dhacay hoolka shirarka ee degmada wardheer ee xarunta gobolka Doolo kulan balaadhan oo lagaga hadlayo dar dargalinta hawlaha horumarka, nabadglayada, maamulka suuban iyo barnaamijyada arimaha XDSHSI.
Kulankan oo ay hogaaminayeen gudoomiyaha gobolka doolo mudane Maxamuud Cali Axmed iyo gudoomiyaha degmada wardheer mudane Maxamuud Sheekh Cumar ayaa waxaa soo qaybgalay shaqaalaha dawlada ee degmada wardheer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada wardheer iyo santarada hoos miyaada degmada wardheer.
Kukankaa ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane maxamuud cali axmed oo sheegay in ay ujeedada kalankani tahay mid lagu sii xoojiyo hawlaha horumarka iyo arimaha xisbiga wuxuuna sheegay in qaybaha kala duwan ee bulshadu yihiin hirgaliyayaasha iyo ka faa’iidaystayaasha hawlaha horumarka nabadglyada loogana baahan yahay in ay sii xoojiyaan kaalintooda.
Dhankiisa gudoomiyaha degmada wardheer mudane maxamuud sheekh cumar oo ka hadlay kulanka ayaa sharax dheer ka bixiyay istaraatajiyadaha iyo qorshayaasha u dajisan xukuumada DDSI ee ka salaysan tir tirida saboolnimada iyo hirgalinta koboca dhaqaalaha iyo tabaha fulineed ee lagu hirgalinayo qorshayaasi. Gudoomayaha ayaa tilmaan ka bixiyay qaybaha kala duwan ee bulshada doorka ay ku leeyihiin hirgalinta hawlahaasi.